Trionn Design Dhizaini Webhusaiti - Dhizaini magazini
Dhizaini Webhusaiti Iyo chena turuvhi inopa mamiriro akakodzera ekuvakira pane. Iyo yakasviba inotapira yemavara musanganiswa inopa yakakwana yekutarisa-inobata chinhu chinokwevera muoni. Iko kusanganiswa kwe serif uye sans serif fonts uye uremu uye mavara anoitisa iwo musoro wakasanganiswa unodzvinyirira muoni kuti aongorore mberi. HTML5 Parallax animation webhusaiti neKupindura, Isu tine yedu yeVashandi Vector Character Design. dhizaini yayo yakasarudzika Kubva narwo neBlue color ine yakanaka & inotsvedza mifananidzo ..
Zita rechirongwa : Trionn Design, Vagadziri zita : Sunny Rathod, Izita remutengi : TRIONN DESIGN.
Webhusaiti uye webhu dhizaini
Dhizaini Webhusaiti Sunny Rathod Trionn Design